Ministry of Labor and Social Affairs – Somali Government – Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada marnaba wax cabasho ah kama soo yeerin umana soo bandhigin bahda saxaafada.
Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada marnaba wax cabasho ah kama soo yeerin umana soo bandhigin bahda saxaafada.
Abdirashiid Heydara June 12, 2017 Comments Off
waxaa la yaab leh website-yada kala ah Caasimada.net iyo Goobjooge.net halka ay ka keeneen warka been abuurka ah oo lagu bahdilayo Wasaaraddda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada, ay ku baahiyeen baraha bulshada, taasina maaha mid sax ah ay soo bandhigaan website-yadaasi waana been la soo dhoodhoobay oo sal iyo raad laheyn.
shalay oo ay taariikhda aheyd 11/6/2017 Wasaaradda shaqada waxay qabatay shir jaraa’id lagu soo bandhigay waxii u qabsoomay iyo waxa u qorsheysan wasaarada ee lagu horumarinayo howlaha shaqada iyo shaqaalaha Soomaaliyeed.
wasiir ku xigeenka wasaaradda shaqada Xil. Cabdicasis Saalax Carmaan oo dhiiro gelinayay mas’uuliyiinta wasaaraddda kuna bogaadiyay howlaha ay u hayaan ummadda Soomaaliyeed waxuu sheegay in kormeerka wasaaradaha iyo dar dar gelinta shaqada lagu howlanaado waxuuna tusaalle u soo qaatay RW waxuuna yiri “Ra’iisal wasaarihii dhammaa ee dalka ayaad arkeysaa isagoo wasaaradaha tegaya, shaqaalihii wareysanaya, taas anaga ayey ihaano nagu tahay, waxaa la doonayaa in aan fadhiga ka kacno oo aan gudano howlaheyna shaqo” .
Wasiir ku-xigeenka Wasaarada shaqada iyo arrimaha bulshada waxuu hadlkaasi uga dan lahaa guubaabin mas’uuliyiinta wasaaradda shaqada iyo arrimaha Bulshada.
Soomaalida waxay ku maah maahday (HADAL NIN SI U DHEH NINNA SI U QAADAY )
sidaa daraadeed waxaan leenahay bahda Saxaafadda haka fiirsadeen waxa ay ku qorayaan (website yada iyo social media )
Fiir been abuurka Riix Links hoose